Logocloud: zvakasununguka zviwanikwa zvakagadzirwa nevanotaura Therapists - Kudzidzisa Kuziva
Logocloud: zvemahara zviwanikwa zvakagadzirwa nevanotaura Therapists
Iri peji rakagadzirwa zvichitevera iyo COVID-19 emergency iyo iri kudzikisira mukana wekupa nekuwana matauro ekurapa ekutaura. Varapi vekutaura vaunoona vataurwa pane ino peji vakagovana nemazvo zvinhu zvavo kubvumira vana nevakuru kuti vave nezvigadzirwa zvekudzidzira pamba pavanomirira kutanga kwezviitiko zvakajairika. Kutenda kwangu kwemoyo wese kunoenda kune vese.
Iri peji harina webhu-mapulogalamu ini andakaita, ayo anowanikwa mahara pa GameCenter nekudzidziswaCognitivo. Kuti unditumire chinongedzo kune chiitiko kana zvinhu ndinyore pa [email inodzivirirwa] kudoma zita rako, musoro wechiitiko uye tsananguro pfupi yekuti ndiani achazoshandisa. Izvo zvakakosha kuti izvo zvakatumirwa hazvina mifananidzo kana zvemukati zvakachengetedzwa nekodzero. Kuremekedza hunhu hwevashandi pamwe navo, izvo zvinhu zvakagashirwa zvinoburitswa zvisina gadziriso nevashumirwa.
Syllables, phonology uye metaphonology
Mhanya nendiro naElena Angelucci
Taura mazwi acho neyekutanga inotapira c uye tsvaga iyo pikicha naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi na / f / uye tsvaga iyo piuru naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi na / k / uye tsvaga iyo piuru (1) naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi na / k / uye tsvaga iyo piuru (2) naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi acho ne / l / + konsonanti uye uwane mufananidzo naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi acho ne / r / + konsonanti uye uwane mufananidzo naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi ne / s / yekutanga uye tsvaga iyo piuru naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi acho neyekutanga / s + consonant / (1) uye tsvaga iyo pikicha naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi acho neyekutanga / s + consonant / (2) uye tsvaga iyo pikicha naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi ne / sz / uye tsvaga pazuru naBenedetta Ticozzelli
Taura mazwi ne / t / Median uye tsvaga iyo piuru naGiorgia Zaghini
Taura mazwi acho neyekutanga / v / Median uye tsvaga iyo piuru naBenedetta Ticozzelli
Kusarura r / l naAlessandra Rocchi
Ski / Ci kusarura naGiulia Montagnese
Kusarura t / d naElena Angelucci
Ngatiitei keke (onomatopoeia) naGiulia Montagnese
Chii chinonzi syllable yekutanga naAlice Martinelli
Riddles neiyo inotapira C mune yepakati chinzvimbo naGiorgia Zaghini
Riddles neapakati T naGiorgia Zaghini
Ndangariro dzemabhurutse eblue naAlessandra Rocchi
Ndangariro yemazwi neiyo inotapira c mune yekutanga chinzvimbo naGiorgia Zaghini
Ndangariro dzemazwi ne / k / naBenedetta Ticozzelli
Ndangariro dzemazwi ne / f / naBenedetta Ticozzelli
Ndangariro yemazwi ne / s / yekutanga naMonica Checchin
Ndangariro dzemazwi ne / s / + Consonant naSara Frizzarin
Ndangariro dzemazwi neyakavanzika -ST- (1) naRoberta Benedetti
Ndangariro dzemazwi neyakavanzika -ST- (2) naRoberta Benedetti
Memory yemazwi neyekutanga T- (1) naGiorgia Zaghini
Memory yemazwi neyekutanga T- (2) naGiorgia Zaghini
Ndangariro dzemazwi ne / ts / naBetetta Ticozzelli
Ndangariro dzema syllables ne S naSara Frizzarin
Mazwi emazwi neyakaoma C naGiorgia Zaghini
Tarisa uone iyo S + consonant pikicha naSara Frizzarin
Tarisa uone iwo mufananidzo S + yekutanga consonant naSara Frizzarin
Syllables ine S (tsvaga iyo yakavanzika pikicha) naSara Frizzarin
onomatopee naGiorgia Zaghini
Unganidza mazwi neanowo syllable yekutanga naAlice Martinelli
Taura mazwi ne / k / naAmbra Cravero
Taura mazwi ne / tr / uye tsvaga iyo piuru naSerena Immovilli
Ndangariro dzemazwi ne / tr / naSerena Immovilli
Riddles ne / g / naMaria Elisa Kanale
Ndangariro yemazwi ane sc naMaria Elisa Kanale
Batanidza masendi uye tsamba M naValentina Piazzoli
Batanidza masendi uye tsamba V naValentina Piazzoli
Batanidza masendi uye tsamba L naValentina Piazzoli
Batanidza masendi uye tsamba F naValentina Piazzoli
Batanidza masendi uye tsamba N naValentina Piazzoli
Izwi kududzirwa neshoko SP boka (Ben10) naSara Manzi
Mazita eshoko neboka rePS (Rakafukidzwa) naSara Manzi
Kudoma mazita na / k / Median (SpiderMan) naSara Manzi
Pakutanga syllable memory naAlice Fazone
Penda manhamba anotanga nenzira imwe chete naAlice Fazone
Pair mifananidzo inopera neiyo syllable naAlice Fazone
Ndangariro dzenhetembo naAlice Fazone
Yekupedzisira syllable memory naAlice Fazone
Quadrisyllabic izwi izwi naAlice Fazone
Riddles ne / r / naAlice Fazone
Bisyllable mapuzzle naAlice Fazone
Mazwi emazwi kuputsa naAlice Fazone
Nziyo dzekuroora 1 naAlice Fazone
Nziyo dzekuroora 2 naAlice Fazone
SKI puzzle (yekutanga uye yepakati chinzvimbo) naFrancesca Austoni
Memory SCI (kutanga chinzvimbo) naFrancesca Austoni
Memory SCI (yekutanga uye yepakati chinzvimbo) naFrancesca Austoni
Nhoroondo yekudya kwemangwanani naMonica Checchin
Tida kumusoro utaure nyaya yacho "Hedgehog, squirrel uye kubhururuka" naSara Frizzarin
Rongedza uye utaure nyaya "The Tiffi butterfly" naSara Frizzarin
Nyaya dzakateerana naAlice Martinelli
Rongedza nguva yakatarwa naAmbra Cravero
Kuverenga uye kunyora
Taura mutsara uyu kumufananidzo (1) naAlberto Mariotto
Taura mutsara uyu kumufananidzo (2) naAlberto Mariotto
Chinyorwa chimwe-chimwe naAlessandra Rocchi
Cloze (Henry Hart theme) naAlessandra Rocchi
Cloze 1 naGiulia Savio
Cloze 2 naGiulia Savio
Spelling sarudzo naAlessandra Rocchi
Hangman yemashoko ane CH naAlberto Mariotto
Hangman yemashoko neCI-CE naAlberto Mariotto
Hangman yemashoko ane GL naAlberto Mariotto
Hangman yemashoko neGN naAlberto Mariotto
Hangman yemashoko ane SC naAlberto Mariotto
Ngativerengei… GH / CH naElena Angelucci
Tsvaga rakakodzera izwi / mapepa maviri naAlberto Mariotto
CI / GI kusarura naGiulia Groppelli
Unganidza mazwi nemifananidzo naAlice Martinelli
Kusarura kwemashoko neV uye F naAlice Martinelli
Verenga chirevo uye ubatanidze icho nemufananidzo wakakodzera naAlice Martinelli
Izwi rekudambuka neshoko bhuroka naClaudia Fusari
Cloze by gn / gl naRoberta Marracino
Cloze yezvirevo naRoberta Marracino
Kunzwisisa kwemitsara naDiego Abenante
Kukamurwa uye semantics
Kugadziriswa kwemaruva, midziyo uye chikafu naAlessandra Rocchi
Ngatizvigonei naElena Angelucci
Kufananisa uye kududza mavara naAmbra Cravero
Gadzirisa mhuka kubva kune yakakura kusvika kudiki naAmbra Cravero
Inotapira uye ine chikafu chinonaka chikafu naAmbra Cravero
Order chikwama (mari) naSerena Immovilli
Order wallet (marita uye mabhengi) naSerena Immovilli
Ini ndinogona kuitenga iyo € 2,5? naSerena Immovilli
midziyo naDireta Ruggeroni
Mitambo yemukati / yekunze naDireta Ruggeroni
Tikaverenga! naElena Angelucci
Riddles pamatafura ekuwedzera naGiorgia Zaghini
Isu tinodaira nhamba 1 kusvika ku5 naAlberto Mariotto
Isu tinodaira nhamba 1 kusvika ku10 naAlberto Mariotto
Mamwe kana mashoma euros? naSerena Immovilli
Zvakawanda kana zvishoma? (1) naSerena Immovilli
Zvakawanda kana zvishoma? (2) naSerena Immovilli
Tsvaga vaviri vaviri vakaenzana nguva (masikati) naSerena Immovilli
Tsvaga iyo nguva yakaenzana nguva (mangwanani) naSerena Immovilli
Inguvai iyo? naSerena Immovilli
Kuongorora uye kugadzirwa kwemashure S / T mairi
Munyori: Elena Campana
Link: Dhawunirodha kubva kuDhiraivha
Phonological rusaruro maitiro
Munyori: Francesco Petriglia
Mashandisiro aungaita: Mune aya maekisesaizi, ruzha rwese runobatanidzwa neruvara nehunhu.Basa remwana kuona kuti ruzha rwakataurwa nemunhu mukuru rwunoenderana neyekutanga kana yechipiri hunhu. Semuenzaniso, pese panonzi mukuru akadaidza syllable SA, mwana anofanirwa kunongedza denderedzwa regirini riri pamusoro pechiso kufambisa hunhu. Kana, kune rumwe rutivi, mukuru akataura FA, mwana anofanira kuratidza denderedzwa repepuru. Iwo mabasa acho anogona kuve anodzoserwa nekukumbira mwana kuti aburitse syllable chaiyo, nepo munhu mukuru achizofungidzira kuti nderupi ruzha rwaachangobva kunzwa.
Chishandiso cherusarura t / k
Munyori: Alice Sordi
Pakutanga CA / CIA Goose Game
Munyori: Fed America Ciceri
Central CA / CIA Goose Mutambo
Semantics - Chii chinopinda
Munyori: Debora Bibiano
Semantics - Kufanana uye misiyano
Tsvaga mazwi ane v
Munyori: Priscilla Malhamè
Dhirowa mazwi ne v
Kutumidza mazwi nezvinyorwa
Kusarura / ts
Munyori: Bruna Agostinis
Tsananguro: mushure mekubatanidza ruzha / s / kunyoka uye ruzha / ts / kune chigero, tanga mharidzo, tinya museve wekurudyi uye teerera kurira kana syllable uye kumbira mwana kuti abate nyoka kana chigero zvinoenderana nezwi ranzwikwa, iwo mufananidzo unoenderana unongofamba kana tangobaya nembeva.
/ v / mumasiraidhi uye nesangano
Tsananguro: tanga iyo mharidzo, uchimanikidza museve unoita kuti ngarava ifambe uye panguva imwecheteyo unobatanidza iyo phoneme / v / kuitambanudzira kusvika kumusoro kudzvanya museve, mifananidzo inoita senge ine zita rekuridza chinangwa.
Mhuka onomatopoeic inonzwika
Tsanangudzo: tanga iyo mharidzo, uchidzvanya pamhuka imwe neimwe uchanzwa vhesi yacho.
Lexical kunzwisisa - mari
Tsananguro: tanga mharidzo, kumbira mwana kuti abate chikafu nekuverenga kumusoro kurudyi, uchimanikidza museve chikafu chinopinda mungoro.
Tsananguro: tanga mharidzo uye kumbira mwana kuti abate munhu anopinda, iyo chaiyo mufananidzo inongofamba kana isu tavhara pairi negonzo.
Tsananguro: tanga mharidzo uye kumbira mwana kuti abate mufananidzo unotanga seuyo uri pakati, kana mwana abata mufananidzo wakarurama, pinda museve kurudyi kuti uuye nekusimbisa.
Tsananguro: tanga mharidzo uye verenga syllable, bvunza mwana kuti abate mufananidzo uyo unotanga neiyo syllable, kana mwana abata mufananidzo wakakodzera, pinda museve kurudyi kuti uuye nekusimbisa.
Spatial Concepts: Iri Kupi?
Tsananguro: mune ese aya ppt mune ekutanga masiraidhi iwe unogona kubvunza mwana "aripi X?", Kana mwana achipindura (semuenzaniso "mudengu"), nekudzvanya museve kurudyi mufananidzo unowoneka (semuenzaniso tswanda) uye, kudzvanya zvakare, iko kusimbisa kunoonekwa.
Mumasiraidhi ekupedzisira, kune rimwe divi, zvinokwanisika kumisikidza kurongeka kwemitsara yakawedzerwa yakawedzerwa nerubatsiro rwechivara chemavara: unogona kubvunza mwana kuti "chii chinoitika?" kudzvanya museve kurudyi kunoonekwa chinhu chimwe chechirevo panguva.
Link: Lontano - mu - Sotto - On - pedyo
Munyori: Veronica Marrocu
Tsanangudzo: Mune ichi chiitiko chakareruka mwana anokumbirwa kuti ataure chifananidzo chiri pamusoro uye, kana achinge atumidzwa zita, anokumbirwa kusarudza dengu rakaringana (muchero kana miriwo?).
Link: Dhawunirodha kubva kune kutyaira
Mhuka: kuratidzwa kwekutarisa uye kwekunze
Munyori: Greta Caligaris
Tsananguro: mukati mefaira
Game of hongu uye kwete
Munyori: Elena Minno
Metaphonological mutambo we hanzi
Tsananguro: Mune uyu mutambo wakapusa wehosi iyo mitemo ndiyo yakasarudzika.
Kuti utambe iwe unofanirwa kuisa iyo faira mumodhi yemodhi. Nekuverenga huwandu hwebhokisi maunosvika, unobva watotumirwa kumasiraidhi nebasa racho kuti riitwe. Chiitwa chega chega chine hupenyu hunoitwa kana mbeva ikadzvanywa.
Yambiro. Iwe unofanirwa kutanga waedza kuvhiya nekuti kana iwe ukachekera mbeva kazhinji iwe unogumira pane inotevera Slide.
Kuti udzokere kuchiratidziro netraki, ingo pfuurira paMinnie Mouse icon pazasi.
Kudzidzira kushoma uye zvese zvinova nyore 🙂
Kukanganisa chete .. hapana pawns asi ... tinodzidzisa ndangariro nekukumbira mwana kuti arangarire chinzvimbo chake !!
Kuiswa kwe / s / + konsonanti munzvimbo yepakati
Munyori: Gloria Bimbi
Dhizaini ye / f / mune yekutanga chinzvimbo
Munyori: Alessandra Scafasci
Mavara ane bisyllabic mazwi
Vanyori: Cecilia Saioni naChiara Gordiani
Ruzha basa F
Vanyori: Sara Ravasio
Minimum maviri maviri TD
Vanyori: Cecilia Saioni
Zvishoma pairs / t / - / k /
Vanyori: Rosaroberta Marini
Kuuya kwenyoka muchadenga - / sp / intervocalica
Vanyori: Chiara D'Alessandro
Nhoroondo ye / k / e / ts /
Vanyori: Fed America Demurtas
Tsananguro: Tanga mharidzo. Mwana anotodzokorora chete mazwi ari mutsvuku, obva abaya kamwe uye anotarisira kuti hupenyu hwese huitike
Vanyori: Simona Corsi
Rhyming mitsara: mutambi anofanira kupedzisa mutsara nekugadzira rwiyo
Nziyo dzinosarudzwa pakati pezvisarudzo zviviri: mutambi anofanira kuziva, kusarudza pakati pezvisarudzo zviviri, mazwi anoti rwiyo
Link: Nziyo Miridzo yakasarudzwa pakati pezvisarudzo zviviri
Kusarura / m / uye / n / nepakati nepakati
Vanyori: Martina Lazzari
Bhingo ne / v / kutanga
Bhingo ine mafonimisi akasiyana
Vanyori: Claudia Morassutti
Inotanga ne ... syllable yekutanga MA-SA
Vanyori: Veronica Viti
Zvinyorwa zvepa topological - aripi Dade naLili
Vanyori: Davide Mongelli naLinda Bottura
Kusarura m / n
Kusarura r / l
Mutambo weGoose ne / k / median
Vanyori: Lucia Botti
Kakamuri: michero uye miriwo
Vanyori: Greta Calligaris
Link: Tamba paScratch
Kusarura pakutarisana nemazwi akafanana-dierse mazwi
Tsananguro: Kana mazwi akafanana, kana mwana apindura nemazvo, ingobaya bhawa repakati uye vaviri vevana vakafanana vanofamba, kana mazwi akasiyana, tinya museve wekurudyi. Kana mumwe wevaviri vakaroorana auya padyo nedengu, izwi rekuti "zvakanaka kwazvo" richaonekwa.
Memory yakapatsanurwa nefoni
Vanyori: Dora Ghidelli
Nhoroondo yekuisa iyo / k /
Nhau dzemagariro uye manzwiro
Alice uye vagaries
Munyori: Giulia Montagnese
Emotions uye zvepfungwa nyika
Munyori: Elisa Tosi
Little Red Riding Hood mu CAA
Munyori: Manuela De Santis
Link: Ona vhidhiyo yacho paYouTube
Mhuka: kuratidzwa kwezviratidzo
Munyori: Greta Calligaris
Munyori: Alice Marotta
Mashandisiro acho: Izwi rekuti sikero faira rinokutendera kudzidzisa ndangariro dzako. Chiitwa ichi chinosanganisira kurangarira mazwi akaverengwa nekuadzokorora zvinonzwika, mushure meimwe nhamba yekukurudzira (1 kana 2), kana rakiji ikaita yero uye isina chinhu. Kuti ushandise iyo faira isa muhurukuro uyezve negonzo kana bhawa repakati ita kuti masiraidhi aende kumberi. Iyo poindi yemagetsi inogadzirika, pane atove mana zvinyorwa zvine span ye4 uye imwe ine span ye1, ingoisa mazwi matsva mumakona
Link: Span ye1 Span ye2
Kutarisa uye mabasa ehukuru
Kushanda ndangariro tafura (4 masiraidhi)
Maitiro ekuishandisa: Nekupa tafura yekutsikisa, mwana anokumbirwa kubata nemusoro masiraidhi nenzvimbo dzawo. Nekubvisa syllable tafura uye kuratidza tafura iyo nenzira, mwana anofanira kudoma mazita anowanikwa munzira.
Stroop athari makadhi
Maitiro ekuishandisa: Makadhi ekukurumidza kutumidza zita basa, asi mune stroop modhi
Game miseve kumusoro / pasi
Tsananguro: Iyo yekurovedza muviri ndiyo PASAT: mune yekumusoro modhi iwe unobvunzwa kuti urangarire iyo nhamba yakaonekwa kare uye wobva wawedzera kune iyo yauri
kutarisa. Kune vana vatove neruzivo muchiitiko ichi, mavara anokutendera kuti uomese basa, semuenzaniso:
chimwe chiitwa chinoenderana nemuvara;
shanduko yekushanda inoenderana neruvara (semuenzaniso kubva + kusvika x)
Tsananguro: Iwe unobvunzwa kutumidza zita kana bepa racho rachena, nepo iro bepa repepa richidikanwa kana rakatsvuka. Kune vana vane ruzivo rwakawanda, ruvara runogona kuverengerwa neumwe mutemo (semuenzaniso: "rova ruoko kana paine tsvuku", kana "usataure chero chinhu kana paine yero").
Isu tinovhiringidza kutaura kwechirapi?!
Tsanangudzo: Chishandiso chekushanda nacho pa:
- lexicon mukubuda
Iyo lynx - yekuona mutambo
Description: Rodha mirayiridzo
Kutarisa kune kutevedzana kwechimiro uye mavara
Tsananguro: Simba poindi mharidzo ine akateedzana ezviitiko zvine chinangwa chekusimudzira ndangariro, kuona, kutarisa. Murwere anobvunzwa kuti afungidzire nekuyeuchidza kuteedzana uye chinzvimbo chemavara uye maumbirwo. Mushure mekuratidzira kuteedzana kwega kwega, varwere vanozokumbirwa kuti vaite zviito. Kutevera kuitiswa kweizvo zvinokumbirwa, zvinokumbirwa kutaurisa kuteedzana kwemavara / maumbirwo akamboratidzwa, zvichitevera nzira dzakapihwa.
Memory uye Visual Attention
Author: Arianna Chiorri na Ilaria Mangino
Iro basa rakakamurwa kuita matatu mazinga ekuwedzera akaoma.
Muchikamu chekutanga, mwana anozopihwa makadhi maviri: kadhi rega rega rine mhuka, ruvara uye nhamba. Kuratidzwa kwemakadhi kunotora masekondi mashanu uye mwana anofanirwa kubata nemusoro chete nhamba nemhuka yemakadhi ese ari maviri. Mushure mekuratidzwa, iwe unozokumbirwa kuti urangarire ingave nhamba kana mhuka.
Muchinhanho chechipiri mwana achazofanirawo kuyeuka ruvara rwekadhi rega rega.
Chekupedzisira, padanho rechitatu, pamusoro pekuisa mumusoro nhamba, mhuka uye nerudzi rwekadhi rega rega, mwana anofanira kungwarira nekuti vanovhiringidza vanozoonekwa panguva yekuratidzwa kwemakadhi.
Memory zvinhu zvepamba
Kuverenga syllables uye mazwi pamwe nefoni. K /
Kuverenga syllables uye mazwi pamwe nefoni.
Game: snails nefoni.ʃ /.
Kuverenga syllables, mazwi nemapuroni na / s /, / ts / and / dz /
Kuzivikanwa kwekutanga syllable
Tsanangudzo yemifananidzo + kunyorwa kwehunyorwa
Phoneme / grapheme mapa
Munyori: Giulia Delfino
Munyori: Sara Jane Raffaello
Tsananguro: mwana anoona mufananidzo uye anofanirwa kunyora iro rakakodzera izwi, nekukurumidza mushure maizvozvo anozova nemhinduro yekuona kuti aratidze kurongeka kwemhinduro
Link: CG Digrams uye maTrigrams Mifananidzo yePB
Link: CG Digrams uye maTrigrams Spelling sarudzo PB
Kuverenga mapoka ekubatanidza
Vanyori: Chiara Campana
Pac-murume kupira sarudzo
Link: Tamba pamhepo
Kuverenga uye kunzwisisa: Meatball
Tsanangudzo yemifananidzo ine rutsigiro rwekuona uye yekuongorora
Makadhi ekukurumidza kuverenga gumi
Munyori: Elena Matesini
Maitiro ekuishandisa: Chinangwa ndechekukurumidza kuverenga huwandu mukati megumi, kubata nemusoro maitiro uye anozoyeuka makuru ekuverenga manhamba ne10. Kana makadhi akadhindwa, mitambo inogona zvakare kuverengerwa nguva dzose nechinangwa chekushanda nayo zvakaitwa na10.
Mechi uwandu hwehuwandu
Rubamazzo nenhamba nagumi
Nguva matafura chirara (kasere tafura)
Tsanangudzo: Kuwedzera matafura epazasi akafuridzirwa na Yekuziva Kudzidzisa modhi
Inocherechedza pendi / chivakwa
Link: Ndakaziva pendi Inocherechedza chivimbo
Zvigadzirwa zvakagadzirwa naAdriana Romano
Munyori: Adriana Romano
Tsanangudzo: iyi folda ine zvakasiyana zvinyorwa zvakagadzirwa neyekutaura Therapist Adriana Romano. Kunyanya iwe uchawana:
Mifananidzo yekugadzira makadhi
Minimum maviri maviri makadhi
Bing chiratidzo chehupfumi